Leo Rising - I-Horoscope kunye noBuntu
U-Leo Ukunyuka kwabafana kunye nama-gals aqaqambile kwaye ayenayo, ayenomdla kwaye enze konke okuphezulu.
Iimpawu eziphakamisayo zikhadi lokubiza. Yiyiphi enye ebonayo, kunye nendlela ozikhuthaza ngayo.
U-Leo njengophawu olukhulayo unokuthiwa ngenhlanhla. Xa usemandleni akho, unesiqiniseko, unomusa kwaye unomdla kwabanye ngenxa yokufudumala kwakho.
Njengoko kuvuka uLeo, ufumane ukukhanya kwelanga (uMlawuli wePlanethi weLona) emnyango wakho wangaphambili.
Unobungane kunye nokunyamekela, kwaye unokukwazi ukukhanyisa igumbi ngokumamatheka kwakho. Uziphethe ngokuzithemba, kwaye ngokuqhelekileyo ukhuthaza abanye. Iimpendulo zakho zihamba ngokukhawuleza, ngentshiseko ephazamiseka ngokukhawuleza. Uvuyo lwakho ngokuphila luyabangela ukwelapha, kwaye oku kukunceda abaninzi abahlobo.
Uqhayisa ngokubonakala kwakho, kwaye unqwenela ukuma. Abantu bakhumbula wena ngenxa yokuba ukhona. Oku kunokunciphisa naluphi na ukutyekela kwintloni kwenye indawo kwitshati.
Uyakuzonwabisa ngezinto ezingaphezulu kwezinto eziphezulu okanye ngeengubo zokubamba amehlo. Uza kuphila ngokubonakalayo, okwenza ube yendalo ekusebenzeni, ukuthetha ngamabali, ukufundisa okanye ezopolitiki.
Ukuzijonga kwakho kunokuba kuninzi, kwaye yilapho abantu bakubiza ngokuba yi-egomaniac. Uvame ukukhawuleza uphondo lwakho, okanye iimpondo zenzalo yakho, njengoko uzingca ngokukhethekileyo kubantwana bakho.
Yonke into oyidalayo yongezwa ngokwakho, kwaye uya kufuna ukuba kuthwale isayinwe sakho esisodwa.
Ngoko unokufumana kunzima ukusebenzisana okanye ukudlala i-fiddle yesibini kubuntu obunamandla.
Ukuba iqhayiya lakho lilinxeba, uyabuyela kwaye usenokuxinezeleka kwixesha elide. Uza kufihla uze ulungele ukubuyela kwakho, kwaye uphinde uvele uphawula kwakhona.
Unokuba nobugovu kwaye uphawule.
Kwaye unokuba ngumtshato onenkani ukuba wenze izinto.
Kodwa ungumqondiso ophefumlelweyo womlilo kwaye uyasasazeka. Unesisa kwaye unentliziyo enkulu, kwaye ezo mpawu zebombast zikhokelwa lula. Uyakhangeleka ngenxa yokukhanukela kwakho ubomi, ubuqu bakho kunye nokukwazi ukukhuthaza abo bajikelezayo.
Ukufuna Ukuzimela Nabanye
Unemigangatho ephakamileyo kunye neTowamp isitampu ngobuntu bakho. Ufumana u-ambition we-Leo, kunye ne-charisma yenkokeli ezalwa yendalo.
Unomphathi oqinileyo, kodwa unesiko lokukhuthaza abanye. Ufuna ukuzungezwe ngabantu abenza ukhangele kakuhle. Ngoko unomntu ohlala ekholisa abanye, kunye nokubeka ukukhanya kwinto eyenza yena okhethekileyo.
Ukuba kukho ezinye izinto eziphambili kwitshati, uba ngumntu ophangazelayo impumelelo yakhe okanye uthatha ikhredithi ngenxa yabanye. Unayo i-ego enempilo, kodwa ihamba kakhulu xa ingahambelani nomoya wendawo yakho kwisikimu sezinto.
U-Leo onamandla uya kwenza izinto zenzeke. Kodwa xa isetyenziselwa ukwesabisa abanye, uya kukhwela ngokukhawuleza i-PR. Uyakwazi ukudala "uphawu" olunamandla kwi-persona yakho, kodwa kuya kufuneka libukele ukuba aluyi kuqhuma isikhali esetyenziswe kwimiphefumlo ebuthathaka.
Oku kwaziwa ngokuba ukuphosa ubunzima bakho malunga nokufumana oko ufuna. Futhi usebenzisa amandla obuntu bakho ukuze ufumane.
I-Leo Growing negative ifuna ukuqwalaselwa lonke ixesha kunye neengqungquthela ukuba ayilona ubungqina bekhwalithi abayifunayo. U-Leo unesimo sengqondo solawulo, kwaye esona sikhulu kakhulu, siphumelela ukungafuni abo babona njengento engamangalisa kunokuba bayabonakala.
Ubuntu bemizimba: ilanga, lidlala, lithandekayo, livuya, lixhala, lizithemba, likhukhume.
IQumrhu kunye nesitayela: iinwele ezinkulu ezinobumba, iilebula zetekisi, iingubo ezithambileyo, imigca edibeneyo, ubucwebe begolide, iintsimbi zeenwele ezibomvu, iintsimbi.
Oko Kuthetha Ukuba Ungu Virgo Ukuphakama
4 I-R-Movies Ranked Cut to PG-13 by Studios
Ukuba iClub Club Breaks, Ngaba Ndingayifakela Ngethuba Lelo xesha?
I-Quiénes iyakwazi ukufumana i-card ye-green card yes salir yase-USA
Konke Ngohlobo lweSicabangca
I-Wright-Patterson AFB kunye neTeknoloji yeZizwe